Olana amin'ny fanavaozana HomePod voalohany | Avy amin'ny mac aho
Olana amin'ny fanavaozana HomePod voalohany
Andro vitsy lasa izay dia manana amintsika ny kinova vaovao amin'ny tvOS, iOS, watchOS ary Rafitra HomePod izany, arak'izay azonay nanamarina tamin'ny fandraisan'anjaran'ireo mpandraharaha isan-karazany izay efa nanentana tao anatin'ireo kinova vaovao ireo, azo ambara amin'ny WWDC 2018 fa ity rafitra ity dia hatao hoe audioOS.
Fa ny zavatra tianay horesahina ato amin'ity lahatsoratra ity dia ireo tompona HomePod, ao anatin'izany ny tenako, dia manomboka mitatitra fatiantoka amin'ny kalitaon'ny feon'ny mpandahateny mahay izay miteraka tsikera amin'ny orinasa miaraka amin'ny paoma manaikitra.
Raha misy toetra mampiavaka ny HomePod hatramin'ny nanesoranao azy tao anaty boaty ary nanombohanao azy voalohany, dia ny famokarana bass dia lalina sy tsy azo tononina ary izany no tadiavin'ny tompona ity kely ity . Manaiky isika rehetra fa amin'ny vatana kely toy izany dia nahavita namokatra bass i Apple ary, amin'ny ankapobeny ny feo tena tonga lafatra ka nihoarany ny kalitaon'ny marika hafa toa an'i Bose.
Ankehitriny, hoy ny manam-pahaizana tsara, ny teboka malemy indrindra amin'ny HomePod dia ny refin'ny afovoany, izay indrindra no nohatsaraina tamin'ity fanavaozana rindrambaiko vaovao ity tamin'ny vidin'ny herin'ny bas izay nilatsaka be. Tsara ho an'ny mpampiasa mahalala izany zava-dehibe ny afovoany nefa ratsy ho an'ireo mitady hery basikety goavambe.
Ny HomePod dia tsy misy mety fanitsiana ary rehefa ampifandraisintsika izy io ary efa mifandray amin'ny iPhone, ny hany zavatra azontsika atao dia ny manamboatra azy amin'ny rindrambaiko Home sy ny zavatra hafa. Tsy misy ny mety fanitsiana raha oharina amin'ny equalizer ary raha azo atao izany dia afaka manitsy ireo basy ireo ny mpampiasa. Ny azoko mazava dia izaho, amin'izao fotoana izao, Tsy hanavao ny HomePod aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Olana amin'ny fanavaozana HomePod voalohany
Apple mandefa kinova iTunes vaovao ho an'ny tontolon'ny asa